मानिसको musculoskeletal सिस्टम कुनै पनि आन्दोलन मा भारी भार अनुभव गरिरहेको छ। धेरै जटिल संरचना, जोडहरुको छन् तिनीहरूले अक्सर inflamed बन्न र चोट अधीनमा छन्। यस मामला मा, वहाँ एक व्यक्ति को आन्दोलन बाधा र जीवनको गुणस्तर असर कि बलियो दुखाइ हो। अक्सर घुडाको पांग्रा ग्रस्त। विशेष गरी वजन भएका मान्छे मा एक धेरै ठूलो भार लागि यो संयुक्त खाता। र सुनिंनु वा चोट ठूलो दुःख ल्याए।
सबै मान्छे गोडा दुखाइ बारेमा डाक्टर खोल्दै हुनुहुन्छ। यो समस्या को घर उपचार, तथापि, सधैं प्रभावकारी, किनभने पीडा मुक्त को कारण मदत छैन सम्बोधन बिना छ। तसर्थ, यस संग मुख्य समस्या - सही निदान। र चिकित्सा हेरविचार खोज्न, यो मनमोहक बित्तिकै त्यहाँ आफ्नो गोडा मा दुखाइ थियो छ।
एक डाक्टर केले मदत गर्न सक्छ
समस्या एक आघात पछि हुन्छ भने, पाठ्यक्रम, तपाईं traumatologist र हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक जान आवश्यक छ। मात्र तिनीहरूले आन्दोलन को स्वतन्त्रता को द्रुत फिर्ती लागि प्रभावकारी माध्यम सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले काँही दुखाइ मा अचानक, कुनै स्पष्ट कारण लागि आउँछ। यस मामला गर्न कसले लागू गर्नुपर्छ? सबै को पहिलो, यो एक चिकित्सक भ्रमण गर्न उचित छ। उहाँले परीक्षण नियुक्त र डाक्टर भ्रमण गर्न छ के सिफारिस गर्नेछ। सायद, यो एक Rheumatologist हुनेछ। जटिल अवस्थामा मा, निदान डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ जब, तपाईं न्यूरोलजस्ट वा ओस्टियोपाथ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
समस्या को लक्षण
रोग, यस्तो अवस्थामा, अचानक देखा सक्छ गोडा दुख्यो वा तेज दुखाइ मार। घट्दो वा सिढी चढाई विशेष गरी जब जब, हिँड्ने यो intensifies। कहिलेकाहीं यो निकै कुनै पनि आन्दोलन complicates जो limbs, को slightest झुकन पनि गर्न असम्भव हुन्छ। दुखाइ, स्थिर नीरस वा गंभीर हुन सक्छ, र रात वा मा ड्राइभिङ गर्दा मात्र उत्पन्न हुन सक्छ। जोइन्टहरूमा एक भारी लोड वा लामो पैदल पछि दुख्यो गर्न सक्नुहुन्छ। दुखाइ ज्यादातर को गोडा मा अनुवादित छ। तर यो बिरामी र पछि, तल वा संयुक्त माथि हुन सक्छ। र गोडा को दुखाइ पक्ष अक्सर शारीरिक क्षति बुझाउँछ। रोग पुरानो हुन्छ भने, दुखाइ समय समयमा subsides, तर कुनै पनि तनाव पछि, जोखिम चिसो गर्न वा एउटा संक्रामक रोग संग उत्पन्न हुन सक्छ।
जो घुँडा मा दुखाइ लाग्नेछन् गर्न सक्नुहुन्छ
- सबै को पहिलो, जोखिम मा वृद्ध समावेश गर्नुहोस्।
- अक्सर, खेलाडीहरूलाई चोट उजागर गर्दै छन्।
- जोडहरुको को रोगहरु एक जन्मजात predisposition संग उनको मान्छे ग्रस्त।
- जो असहज जूता लगाउने ती।
- अक्सर वजन भएका मान्छे मा दुखेको घुँडा, समस्या गर्भावस्था को समयमा पनि गर्न सक्छन्।
- व्यावसायिक गतिविधि यस्तो लामो समय को लागि घुडा टेक्नु वा उठबस गर्न गर्नेहरूलाई रूपमा जोइन्टहरूमा, को कामकाज को अवरोध हुन सक्छ।
किन दुखाइ हुन्छ
- उपास्थि र बंधन गर्न भडकाऊ वा दर्दनाक चोट।
- तत्संबंधी संयुक्त मा तरल पदार्थ वा कमी को संग्रह।
- एक pinched स्नायु।
- भारी भार अतिरिक्त वजन वा शारीरिक थकान कारण।
- संयुक्त मा विदेशी शरीर संग सम्पर्क गर्नुहोस्।
यो समस्या को कारण
- सबैभन्दा अक्सर पुरानो वा तीव्र गठिया कारण छ। यो बंधन र खनिज लवण को लोच घट्छ किनकी दुखाइ गराउँछ जो संयुक्त, मा सञ्चय छ।
- एक सानो कम साधारण गठिया - संयुक्त उपास्थि lesion noninflammatory अक्षर।
- सामान्य मा, डाक्टर मा वृद्ध को घुँडा दुखाइ संग, कारण जोडहरुमा उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू आउँछन्।
- कमी र गोडा दुखाइ bursitis कारण हुन सक्छ।
- विभिन्न घरेलू र खेल चोट लागेको अक्सर यो समस्या उत्पन्न।
- जन्मजात रोगहरु, चयापचय विकार वा केही रोगहरु पनि घुँडा (गाउट, lupus वा rheumatism) मा दुखाइ हुन सक्छ।
- भारी व्यायाम वा अतिरिक्त वजन।
- भास्कुलर विकार र गोडा संयुक्त गरिब परिसंचरण पनि दुखाइ हुन सक्छ।
- समस्या को कारण एक संक्रमण वा ट्यूमर हुन सक्छ।
रोग कसरी व्यवहार गर्न
मात्र अप्रभावी painkillers को मद्दत एक समस्या समाधान। सबै को पहिलो, तपाईं उनको डाक्टर उपचार prescribes अनुसार, दुखाइ को कारण निर्धारण गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, यो जटिल छ। को चिकित्सकीय उपाय के भाग यो समस्या सम्बोधन गर्न?
1 दुखाइ राहत compresses, मलहम र ट्याब्लेटको प्रयोग गरेर।
समस्या को कारण कि रोग को2उपचार। यसलाई चिकित्सा संस्था मा, साथै घरमा दुवै बाहिर गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीं यो पर्याप्त स्थानीय धन छ, तर मुख्य रूप अझै पनि घूस वा इंजेक्शन लागि दबाइ आवश्यक छ। जटिल र उन्नत अवस्थामा शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक हुन सक्छ।
3. उपचार को अन्तिम चरण संयुक्त गतिशीलता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यो शारीरिक उपचार, भौतिक चिकित्सा वा मालिश को मद्दतले गर्न सकिन्छ। साथै, यो patella एक जटिल संरचना छ र क्षति गर्न धेरै susceptible छ रूपमा, समस्या रोकन को माध्यम थाहा आवश्यक छ।
4 अरू के गोडा दुखाइ संग गर्न महत्त्वपूर्ण छ? घर उपचार आवश्यक विशेष आहार र धूम्रपान र रक्सी अप दिने, जो समस्या worsen गर्न सक्छन् अनुपालन नबुझाउन।
दुखाइ लागि पहिलो सहायता
सधैं चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् मौका छ। तर धेरै पीडादायी गोडा दुखाइ। पहिलो आक्रमण, संभवतः फरक हालतमा घर उपचार:
crutches वा छडी, वा अझ राम्रो प्रयोग गर्न हिड्ने गर्दा - सुत्न;: - सबै को पहिलो, तपाईं घाइते खुट्टा मा बोझ कम गर्न आवश्यक
- दुखाइ र सुनिंनु बरफ को मद्दतले हटाउन सकिँदैन;
- एउटा सानो चोट पछि तपाईं लोचदार पट्टी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै लायक छैन यो कस र दुई दिन भन्दा लागि पकड;
- विरामीहरु को जोडों मा रक्त सुधार गर्न, यो एक कोमल मालिश, अतिरिक्त दुखाइ कारण गर्दैन सिफारिस गरिएको छ।
को गोडा दुखाइ को उपचार व्यापक हुनुपर्छ। analgesics नियुक्त, गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ, उपास्थि मरम्मत र लागि hondroprotektory restorative लागूपदार्थ। मलम गोडा जोइन्टहरूमा, diclofenac समावेश जसको लागि धेरै प्रभावकारी हुन्छ। सबैभन्दा तिनीहरूलाई को प्रसिद्ध - "Voltaren" वा "Ortofen"। यो nimesulide आधारित धेरै लोकप्रिय उदाहरणका लागि, विरोधी-भडकाऊ प्रभाव संग गोडा जोइन्टहरूमा लागि मलम पनि छ। उदाहरणका लागि राम्रो राहत दुखाइ क्रीम र gels को संरचना मा केटोप्रोफेन संग, उदाहरणका लागि, "Fastum जेल", वा ibuprofen आधारित, "लामो"। तर अक्सर केही स्थानीय मिडिया पर्याप्त छैन। चिकित्सकहरु बिरामीको ट्याब्लेट र इंजेक्शन को रूप मा analgesic र विरोधी भडकाऊ दबाइहरु निर्धारित। सबै भन्दा राम्रो उपाय गोडा दुखाइ लागि - यो गोली "tenoxicam।" पनि प्रभावकारी "Indomethacin" "Diclofenac", "Ketanov" र "naproxen"।
परम्परागत व्यञ्जनहरु दुखाइ राहत
दबाइहरु अक्सर, साइड इफेक्ट कारण तिनीहरूले एक लामो समय को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो अक्सर हुन्छ धेरै लामो समय दुखेको घुँडा छ। यस मामला मा लोक उपचार सबै भन्दा राम्रो उपचार हुनेछ। तल सबैभन्दा लोकप्रिय र तिनीहरूलाई को प्रभावकारी छन्:
- गोडा गर्न बन्दागोभी पात पट्टी रात;
- सहिजन मूल र कच्चा आलु अंगीठी र संकुचन बनाउन; तपाईं 15 मिनेट भन्दा यो कम राख्न आवश्यक;
- मह, सोडा र तोरी को एक चमचा लिन र राम्रो मिश्रण गर्न; को गोडा मा एक संकुचन गर्न यो संरचना संग, यो सारा रातको लागि सम्भव छ;
- जोइन्टहरूमा gelatin को उपचार मा धेरै उपयोगी; यो compresses र विभिन्न जेली, सस र मिठाईहरू को रूप मा orally लिन संग गर्न सिफारिस गरिएको छ;
- प्रभावकारी लेप, turpentine, अण्डाको पहेंलो भाग र स्याउ साइडर सिरका बनाइएका (यो को गन्ध छैन धेरै सुखद छ, तर दुखाइ चाँडै टाढा जान्छ);
- धेरै लोक उपचार घुँडा उपचार चाय र infusions सफाई को एक किसिम समावेश; नुन र toxins जोडहरुको Cranberry पात देखि को सबै भन्दा राम्रो उत्पादन, burdock पात, ओखर;
- प्रभावकारी उपकरण Grinder, कागति संग shredded साग मह संग मिश्रित हुन मानिन्छ;
- एक पेट्रोलियम जेली संग मिश्रित सैलंडन रस देखि घुँडा मलम दुखाइ राम्रो-relieves;
- कहिलेकाहीं प्रभावकारी भएको गोडा संयुक्त मा सोडा लोशन छन्।
को घुँडा दुखाइ लागि अभ्यास
जब तीव्र दुखाइ हो, रिकभरी चरण सुरु हुन्छ। यस को लागि सबै भन्दा राम्रो उपकरण विशेष व्यायाम छ। यो घर मा आफैलाई द्वारा गर्न सकिन्छ। सबै अभ्यास अचानक आन्दोलनहरु र घुँडामा बलियो दबाव बिना बिस्तारै गर्नुपर्छ। धेरै यो समस्या पैदल, पौडी र व्यायाम बाइक उपयोगी। तपाईं कुनै पनि आन्दोलन गर्न सक्दैन कि पक्कै हो भने, यो एक डाक्टरसँग परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। उपयोगी बल प्रशिक्षण र stretching। यो खुट्टा मांसपेशीमा बलियो र संयुक्त गतिशीलता सुधार गर्न आवश्यक छ। के तपाईं बिस्तारै आफ्नो घुँडा, डा, पर्खाल मा उठबस भवन र मंच वा पीठ आक्रमण मोड, खुट्टा वृद्धि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो आफ्नो घुँडा दुखाइ को उपचार को लागि एक सुविधा विधि हो। यसलाई कम गर्न सुनिंनु र दुखाइ गायब मद्दत गर्छ जो रक्त, सुधार गर्छ। यस सन्दर्भमा सबै भन्दा राम्रो एक्यूप्रेशर कार्य। तपाईं एक विशेषज्ञ देख्न सक्नुहुन्छ भने, मालिश गर्न र गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, भुइँमा बस्न को टेनिस बल अन्तर्गत आफ्नो घुँडा राखे। तपाईं आफ्नो खुट्टा सार्नुभयो भने, बल पनि घुँडा को बिन्दु प्रोत्साहित गर्नेछन्। यो दुवै हात संग गोडा clasp र, केही बुँदाहरूमा जोखिम प्रदान सबै पक्षलाई यो RUB गर्न सम्भव पनि छ। तर यो प्रक्रिया विशेषज्ञ को आचरण सौंपन राम्रो छ। को गोडा मालिश एक दिन एक पटक 15-20 मिनेट छ। यस्तो दल्नु, सानना र stroking रूपमा प्रविधी लागू हुन्छ। मालिश दुवै खुट्टा नै भने पनि दोस्रो खुट्टा चोट छैन हुनुपर्छ।
गोडा दुखाइ को रोकथाम
- यो यो धेरै अवस्थामा घुँडा चोट मा, ठीक यस कारण छ, आफ्नो वजन निगरानी गर्न आवश्यक छ।
- जूता, आरामदायक लगाउन आवश्यक यसलाई नरम हाडजोर्नी Insoles प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
- आहार पनि जोइन्टहरूमा को रोगहरु मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। फैटी खाद्य पदार्थ र पेस्ट्री को आहार देखि बहिष्कृत गर्नुपर्छ, त्यहाँ तरकारी, फल, माछा र तरकारी तेल प्रशस्त छन्। उपयोगी बेसार र अदुवाको।
- खेल र शारीरिक काम आवश्यक चोट, छैन धेरै overwork आफ्नो घुँडा रक्षा गर्न लागि।
- यो कुनै पनि गंभीर दुखाइ रोक्न समयमा एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ।
उनीहरूको स्वास्थ्य निगरानी घटनाको, तपाईंलाई छिटो र नतिजा बिना घुँडा दुखाइ हटाउन सक्नुहुन्छ। यो रोग को घर उपचार प्रभावकारी हुन सक्छ, तर अक्सर जटिलताहरू गर्न जान्छ। तसर्थ, जोइन्टहरूमा कुनै पनि असुविधा आत्म-medicate गर्न आवश्यक छैन को लागि, एक डाक्टर हेर्नुपर्छ। आखिर, को गोडा सामान्य ट्राफिक लागि यति महत्त्वपूर्ण छ, यो crutches हिंड्न भन्दा सुरक्षित हुन राम्रो छ।
संवैधानिक आदेश अवधारणा। संवैधानिक प्रणाली र यसको नींव को अवधारणा
के "shmuck" गर्छ? को यहूदीहरूको "shmuck" को हुनुहुन्छ?
"Agario" मा तपाइँको आफ्नै सर्भर कसरी बनाउने? सरल तरिका
जाडो लागि बैगुन व्यञ्जनहरु
इन्जाइमहरु को कार्य को संयन्त्र